FIFANINANANA NASIONALY MOMBA FANDIDIANA VATOSOA: Avo lenta ny fitsarana
Efa misokatra ny fisoratana anarana amin’ny fifaninanana nasionaly momba ny fandidiana vatosoa. Ny 2 oktobra 2018 ny fetra farany hanaovana izany ary ny 5 oktobra 2018 kosa ny fanaterana ny vato hanaovana ny fifaninanana, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny ivon-toeram-pampiofanana momba ny vatosoa (IGM), Andrianirina Rasolonjatovo. Avo lenta ny fitsarana amin’ity andiany faha-roa ity satria mpitsara iraisampirenena momba ny vatosoa avy any Inde, Thaïlande, Londres no hitsara ny fifaninanana. Hotolorana “machine” fandidiana vato izay mandrombaka ny voalohany. Ankoatra izany, ho entina hampirantiana mandritra ny fivoriana iraisampirenena momba ny vatosoa amin’ny volana novambra 2018 izay vatosoa tsara indrindra.
98 % ny vatosoa ahondrana any ivelany dia “brut” avokoa. Tanjon’ny fifaninanana nasionaly momba ny fandidiana vato ny hamadihana io tarehimarika io mba ho ny vato voadidy na “taillé” no betsaka ahondrana. Nambaran’ny tale jeneralin’ny IGM hatrany fa lafo kokoa ny vidin’ny vato “taillé” noho ny “brut”. Manome fiofanana ireo mpandraharaha momba ny vatosoa ny IGM mba hahamatihanina azy ireo. Manana laboratoire ihany koa ity ivon-toerana ity mba hanamarinana ny vatosoa hamidy fa azo antoka ary manaraka ny fenitra iraisampirenena.
‹ ORANGE MONEY ET BMOI : « Effectuer des opérations bancaires à partir d’un téléphone mobile »	› KANDIDA MAILHOL : Hiala rehefa tsy tanteraka ny fampanantenana